काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले प्रहरीभित्र ३० वर्षे सेवापछि अवकासको प्रावधान हटाउने प्रस्तावसहित नयाँ कानुनको मस्यौदा तयार गरेको छ । प्रस्तावित विधेयकमा उमेरको अधिकतम हद ५८ वर्ष मात्र कायम हुने उल्लेख छ...
सरकारले दशैंअघि प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने सम्भावना निकै कम छ । प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति गर्न र राजधानी तोक्न प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको मन्त्रिपरिषद्को राजनीतिक समितिले अझै छलफलसमेत थालेको ...
संसद्को आयु झन्डै एक महिना मात्र बाँकी रहँदा दर्जनौं विधेयक पारित गर्नुपर्ने जिम्मेवारीबाट पन्छिँदै सभामुख ओनसरी घर्तीमगर विदेश भ्रमणको तयारीमा जुटेकी छन्। सभामुख घर्ती असोज पहिलो साता चीन र तेस्रो सा...
कति पढेका छन् हाम्रा नेता र मन्त्रीले ?
दीपेन्द्र सापकोटा, /नयाँपत्रिकाबाट टेलिभिजन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई नेताहरूको योग्यताबारे प्रश्न गरियो । देउवाले जंगिएर त्यसको जवाफ दिए । त्यो सन्दर्भ त्यतिवेला सामाजिक सञ्जाल...
४० अर्बको नक्कली सिक्का १० हजार नेपालीसँग
नेपाल राष्ट्र बैंकले अवैध घोषणा गरे पनि नेपालीसँग करिब ४० अर्बको बिटक्वाइन रहेको खुलेको छ । राष्ट्र बैंकको अनुसन्धानअनुसार नेपालमा १० हजार नेपालीसँग बिटक्वाइन छ । एक नेपालीसँग औसत १० बिटक्वाइन भएको अन...
दसैंको मुखमा खाद्यान्नमा मूल्यवृद्धि
काठमाडौं । दसैंको मुखमा आएर व्यवसायीले खाद्यान्नको मूल्यवृद्धि गरेका छन् ।मूल्य बढेर आएको बहाना देखाउँदै व्यवसायीले उपभोक्तालाई प्रतक्ष्य असर पर्ने गरी खाद्यान्नमा मूल्य बढाएका हुन् । व्यवसायीले चाम...
अब ३ दिनअघि बाढीको भविष्यवाणी
काठमाडौं । मुलुकका मुख्य नदी र जलाधार क्षेत्र आसपासमा बसोबास गर्ने स्थानीय बासिन्दा र अन्य सरोकारवाला निकायले अब बाढीबारेको सूचना तीन दिन (७२ घण्टा) अघि नै थाहा पाउने भएका छन् । जल तथा मौसम विज्ञान व...
चुनावको मुखमा धमाधम सीडीओको सरुवा
काठमाडौं । गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले निर्वाचन आचारसंहिताको बेवास्ता गर्दै पाँच दर्जन प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) सरुवा गरेका छन् । कर्मचारीको काम हेरी जिम्मेवारी तोक्ने आफ्नो घोषित प्रतिबद्धताविपर...
भोट तान्न रातीमा के के हुँदैछ मधेसमा
स्थानीय तह तेस्रो चरण निर्वाचनअन्तर्गत प्रदेश २ का १ सय ३६ स्थानीय तहमा नेतृत्वका लागि सोमबार मतदान हुँदै छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रदेश २ का सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र...
काठमाडौं । क्वालालम्पुरको जलान अम्पाङस्थित नेपाली दूतावासमा हतास मुद्रामा भेटिए, रोशन भट्ट । रावाङको एक कागजे झोला बनाउने कम्पनीमा पाँच वर्षदेखि कार्यरत उनी पछिल्ला दुई वर्षयता भने गैरकानुनी कामदारको...
चिन्ता बदर मतको : प्रभावकारी होला त मतदाता शिक्षा ?
काठमाडौं ३१ बैशाख । स्थानीय तहको पहिलो र दोस्रो चरण निर्वाचनमा बदर मत धेरै भएपछि निर्वाचन आयोगले तेस्रो चरणको चुनावमा मतदाता शिक्षालाई जोड दिए पनि प्रभावकारी नभएको गुनासो बढेको छ। मतदाता शिक्षा प्रभ...
मिर्गौला झिकिएपछि पनि दलालले प्रतिबद्धताअनुसार रकम नदिएपछि बोले पीडित – त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जबाटै मिर्गौलाको अवैध कारोबार भएको पाइएको छ । मिर्र्गौला तस्कर गिरोहले आर्थिक प्...
नम्बर प्लेटमा राष्ट्रिय झन्डाको दुरुपयोग
काठमाडौं । सवारी साधनहरूमा विद्यमान साधारण सङ्केताङ्क चिह्न पाटी (नम्बर प्लेट) हटाई विद्युतीय सङ्केताङ्क चिह्न पाटी (इम्बोस्ड नम्बर प्लेट) राख्दा नेपालको राष्ट्रिय झन्डाको गलत प्रयोग भएको पाइएको छ। यस...
‘धुलोले क्षति पुगे निःशुल्क उपचार’
धुलो, धुँवा, वायु प्रदूषण र फोहोरका कारण मानव स्वास्थ्य जोखिममा परेको निष्कर्षसहित सर्वोच्च अदालतले रोकथामका लागि तत्काल सार्वजनिक निर्माण विभाग गठन गरी कदम चाल्न सरकारलाई परमादेश दिएको छ। सरकारी निक...
दोषी ठहर भएका लामालाई सहायक रथीमा बढुवा किन ?
काठमाडौं । मन्त्रिपरिषदको साउन ३१ को बैठकले कुमार लामालाई नेपाली सेनाको सहायक रथीमा बढुवा गरेकोप्रति जवाफदेहीता निगरानी समितिले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । सरकारले यो निर्णय कपिलवस्तु जिल्ला अ...
१२ ज्योतिर्लिंग नेपालमै : पहिलोपटक तथ्य पत्ता लाग्यो
सत्ययुगमा धपधपी बल्ने विश्वास गरिएका शिवजीका बाह्र लिंग नेपालमा फेला परेका छन् । नेपाली १२ ज्योतिर्लिंग दर्शनार्थ भारतका विभिन्न स्थानमा धाउँदै आएका छन् । भगवान् शिव (शंकर) का साक्षात् अवतार भएकाले ज्...
काठमाडौं । जनकपुरको एउटा रेस्टुराँमा वेटर राजु साह एमालेको चुनाव चिह्नअंकित सूर्य छाप टिसर्ट लगाएको भेटिए । चुनाव प्रचारका क्रममा उनले विभिन्न दलको गरेर झन्डै ६ वटा टिसर्ट बटुलेका छन्। ‘प्रचारमा सहभाग...
जसलाई कारवाहीले ‘छुनै सक्दैन’
काठमाडौं । संसदको सुशासन समितिले नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक गोपाल खडकालाई जिम्मेवारीबाट अलग गर्न निर्देशन दिदै सरकारलाई पत्र पठाएको छ । खडकाले प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने भन्दै समितिले शुक्रवार आप...
कागजमा नौ हजार, फिल्डमा तीन हजार
काठमाडौं । ‘मुख्यसचिवज्यू, स्थानीय तहमा कर्मचारी छैनन्, लेखापाल पनि छैनन् । दसंैको बेला कर्मचारीलाई तलब खुवाउनै समस्या भयो । जनप्रतिनिधिलाई पनि काम गर्न कठिन छ ।' संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्...
मध्य रातमा प्रचण्ड मतदाताका घरमा किन ?
असोज २ गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनलाई अत्यन्तै महत्वका साथ लिएका राजनीतिक दलहरुले आफ्ना उम्मेदवार जिताउन शीर्ष नेताहरुको कार्यक्रमलाई तीव्रता दिएका छन् । एकैदिन धेरै कार्यक्रममा सहभागी हुँदै माओवादी ...